ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): လျှောက်
ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရဲ့ စာပေများကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ကျွန်မအတွက် ဆရာစာအုပ်တွေထဲက `လျှောက်´ဆိုသော အတွေးဆောင်းပါလေးတစ်ခုကို နှစ်သက်မိပါတယ် ။ ဆရာရေးသည့်စာအုပ်တွေဟာ လေးနက်သော အတွေးအခေါ် အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြည့်ဝနေပြီး တစ်ခုဖတ်ကြည့်ပြီးတိုင်း ကျွန်မအတွက် လေ့လာစရာ ၊ တွေးစရာတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ် .. ။ ဆရာနန္ဒာသိန်းဇံရေးသည့် စာအုပ်တွေထဲမှာ ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တွေကတော့ `မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း´ ၊ `ကိုယ်ကျင့်တည်ကြည်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြင့်ခရီးစဉ်´ ၊ `ခရောင်းလမ်းကိုဖြတ်ကျော်ခြင်း´ ၊ `မှန်သောစကားများကိုဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော မှတ်ချက်များ´တို့ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေသော ကျွန်မတို့အားလုံးအတွက် `လျှောက်´ဆိုသည့် အတွေးဆောင်းပါးလေးကို ခံစားဖတ်ရှုကြည့်ကြဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
ဧရာဝတီမြစ်နဒီရဲ့ကမ်းပေါ်က သစ်ပင်တန်းကို ဖြတ်သန်းတိုးဝင်လာတဲ့ လေပြေထဲမှာ တမာနံ့တွေ သင်းပျံ့လာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ ပြီးတော့ .. သူပြောတာကိုလဲ အမှတ်ရလာပါတယ်။ သူက ကဗျာပညာရှင်ဆိုတော့ ပြောပုံက
သြော် .. ဘယ်ကိုများ ရောက်ပါလိမ့် ၊ ရောက်မှာပါလိမ့် ..
မရေမရာ ဇဝေဇ၀ါနဲ့ သွားရမည့်ခရီးရဲ့
မသေချာတဲ့ ဝေဒနာကို ရင်မှာခံစားလာရတယ်တဲ့ ..
ဘယ်ရောက်လဲသိအောင် .. ဆက်လျှောက်လို့
ဆက်လျှောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါလား ... လို့ ။´
ဧရာဝတီရဲ့သောင်စပ်ကို ဆင်းလျှောက်လာခဲ့တယ် ..
ကိုယ့်ကိုအမြဲလိုလို စီးလိုက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ ဖိနပ်ကို ချွတ်ကိုင်ရင်း လှိုင်းတွေပြန်လှည့်ဆင်းသွားတဲ့ သဲသောင်စပ်အတိုင်း လျှောက်တယ်။ နင်းလျှောက်မိတဲ့ သဲကလေးတွေဟာ နူးညံ့ပါတယ်။ ညက်ညောပါတယ်။ ပြန်တက်လာတဲ့ လှိုင်းကလေးတွေနဲ့ ခြေအချနဲ့ ထိတွေ့တော့လဲ အေးမြပါတယ်။
လှိုင်းကလေးတွေလာပြီး ခတ်ပေမယ့် သဲသောင်ယံဟာ ဘာမှဖြစ်ပေါ်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ လှိုင်းကလေးတွေ လာခတ်တာကသိမ်မွေ့နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် . သိတယ်ဟုတ်။ ဘ၀ခရီးတစ်နေရာရာမှာ ရင်ထဲမှာ သမုဒယလှိုင်းကလေးတွေ ထိခတ်လာပြီဆိုရင် အဲဒီသမုဒယလှိုင်းကလေးတွေက နုနုလှလှ ၊ ယုယုယယရှိတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် ဘ၀တစ်ခုလုံး ပြိုဆင်းကြေမွသွားနိုင်တယ်´ဆိုတဲ့ သူ့စကားကို အမှတ်ရပြန်ပါတယ်။ သူ့ကိုခတ်တဲ့လှိုင်းက သမုဒယလှိုင်း။
တခြားသူတွေကို ခတ်တဲ့လှိုင်းတွေကတော့ အလိုလောဘလှိုင်းတွေ ၊ ဒေါသအာဃာတလှိုင်းတွေနဲ့ အမျိုးအမည်ခြားနားတဲ့ လှိုင်းတွေ ... အထိအခတ်ပြင်းတဲ့ လှိုင်းမျိုးတွေဖြစ်မှာပေါ့။ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။
လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း နောက်ကို အမှတ်မထင်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။
`ထိတ်´ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ရင်ထဲမှာ လှိုင်းတွေ တဖျတ်ဖျတ်ခတ်နေသလို ခံစားလိုက်ရတာတော့ အမှန်ပဲ။`လျှောက်နင်းခဲ့တဲ့ ငါ့ခြေရာတွေ တစ်ခုမှ မရှိတော့ပါလား။ လျှောက်ခဲ့တာအဝေးကြီး ... အဝေးကြီး လျှောက်လာခဲ့တာ´ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ `လျှောက်ခဲ့မိတဲ့ ငါ့ဘ၀ခရီးက အဝေးကြီး ၊ ဒီဘ၀ခရီးရှည်ကြီးထဲမှာ ငါ့အတွက် အမှတ်ထင်ထင်မည်မည်ရရဆိုလို့ ဘာမှလဲမရှိပါလား´ဆုတဲ့ အတွေးတွေ ပေါင်းဆုံလိုက်လို့ အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားခဲ့တာ။ ရင်ထဲမှာ လှိုင်းတွေခတ်နေသလို ခံစားလိုက်ရတာ .. ဟုတ်ပါတယ်။ ပြန်လှည့်ပြီး တက်လာတဲ့ ရေလှိုင်းတွေက .... လျှောက်နင်းခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ခြေရာတွေကို ပျောက်ပျောက်ကုန်အောင်ဖျက်ဖျက်သွားခဲ့ကြတာကိုး။
ဒါပေမယ့် ..... ခြေရာတွေပျက်သွား ၊ ပျောက်သွားပေမယ့် လျှောက်တဲ့အထိတော့ ရောက်တာပဲ။ လျှောက်ရင်တော့ လျှောက်နိုင်သလောက် ရောက်တာပါပဲ။ ဖိနပ်က အခုမှကိုယ့်ကို တကယ်ခိုစီးပြီး ပါလာတာကိုလည်း သတိထားမိတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးပြောရတယ်။ ခြေရာမထင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းမောရင်း ရပ်မနေနဲ့။ တွေဝေမနေနဲ့။ လျှောက်ရမည့်နေရာဆီကို `လျှောက် .. ဆက်လျှောက်´လို့။ ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စွေစောင်းနေတဲ့ နေခြည်မှာ ရွှေရည်ဝင်းနေတဲ့ မြသလွန်စေတီကို မြစ်ကမ်းပေါ်မှာ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ဖူးတွေ့နေရတာကို အမှတ်ရပါတယ်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 1:03 AM
It seems easy to read!! Un saluto da Roma. Ciao
ခြေရာမထင်ခဲ့တာတွေကို ပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းမောရင်း ရပ်မနေနဲ့။ တွေဝေမနေနဲ့။ လျှောက်ရမည့်နေရာဆီကို `လျှောက် .. ဆက်လျှောက်´လို့။ ရှေ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စွေစောင်းနေတဲ့ နေခြည်မှာ ရွှေရည်ဝင်းနေတဲ့ မြသလွန်စေတီကို မြစ်ကမ်းပေါ်မှာ နှစ်လိုဖွယ်ရာ ဖူးတွေ့နေရတာကို အမှတ်ရပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ Conclusion လေးပဲဗျာ. ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို ရလိုက်တယ်. ဒီပို့စ်လေး တင်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး မလင်းလက်ရေ...
မင်းက လူသာငယ်ပေမယ့် တော်ပါပေတယ်
thank u for sharinganice article